Opa mabhezari kuvana vechikoro | Kwayedza
Opa mabhezari kuvana vechikoro
01 Mar, 2019 - 00:03	 2019-02-28T20:54:03+00:00 2019-03-01T00:03:39+00:00 0 Views
SANGANO rakazvimirira reAfrica Rise Foundation riri kusimudzira dzidzo yevana vanobva kumhuri dzinotambura asi vari shasha muchikoro kuburikidza nekuvapa mabhezari.
Muhurukuro naSolomon Ndondo (25), uyo anova mutungamiri wesangano iri, anoti akaritanga nekuda kwematambudziko aakasangana nawo mukuwana mari yechikoro apo aiyaruka.
“Ndakakura ndichigara naamai vangu vanova zvakare ndivo vaimira sababa mukundibhadharira mari yechikoro. Asi ndakazosvika pakushairwa mari yechikoro mugore ra2010 apo ndaiva muForm 2,” anodaro Ndondo.
“Ndakazopihwa bhezari neveHigher Life Foundation kubva Form 2 kusvika kuyunivhesiti saka ndizvo zvimwe zvakandipa shungu dzekubatsira vana vari kushaya mari dzechikoro,”
Ndondo anoti ari kuita mabhindauko akasiyana ayo ari kumubatsira kuunganidza mari dzaanopinza nadzo chikoro vana vanobva kumhuri dzinotambura.
“Ndinorima nyimo nezvimwe ndichitengesa nechido chekubatsira vana vechikoro vanotsvunha mabhuku asi vachishaya anovabhadharira mari dzechikoro. Ndakatanga nezvikoro zviviri zvandakadzidza kubva puraimari, Vhembe Primary neVhembe High School, zviri kuBeitbridge,” anodaro.
Anoti gore rino akapa vana vanosvika gumi mabhezari.
“Takapa mabhezari vana vanomwe vekupuraimari nevatatu vesekondari uye ticharamba tichivabatsira kusvikira vapedza A-Level.”
Ndondo anoti vane hurongwa hwekuzopa masanitary pads pachena kuvanasikana vechikoro.